Agadzirira Goods nokuti ainge atumirwa
Ranpu Metal ndiyo misoro chivakwa zvinhu mugadziri mubasa tsvakurudzo, kuvandudza, kugadzira, kutengeswa uye basa ose rwemichinjiko, akadai simbi formwork, shoring zvokushandisa, wakakwira puranga etc. Panguva ino, tinogona kupa siyana zvikwepa simbi, zvakadai sezvo rwemichinjiko chubhu, kwakakurudzira nyere etc.
Kunyanya, muna 2016, redu nomoto michina akanga zvatenderwa AWS chitupa. Tinogona kupa OEM basa maererano vanodhirowa dzenyu. kugadzirwa chikwata chedu kunogona kugadzira formwork uye kupa mazano pamusoro muzvirongwa zvako.
Quality uye kuchengeteka runovaka ramangwana riri kutenda kwedu, zvino zvinhu zvedu rave kutengeswa kunyika dzinopfuura 30 Europe, America, Asia, Australia uye Africa.
Shanda nesu, uchawana zvakaisvonaka mumwe-vanorega basa yose maitikiro muzvirongwa enyu, kubva kuronga mari pakupera. We kukubatsira pamwe Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri zvekushandisa nokuronga, akarayira hurukuro pamusoro-nzvimbo kutungamirira, uye kunyange kupfuura izvi.
Hatidi nechokwadi mari kwoupfumi tichiregeredza yepamusoro!
Kwakavakirwa ruzivo redu musika edu, ekisipoti dhipatimendi, Ranpu (Tianjin) International Trade Co., Ltd. anogona kupa vamwe akakodzera zvigadzirwa, akadai Steel Coil, Steel Sheet, C simbi etc.
Ranpu anoedza kuva yose misoro zvokuvakisa mufambisi pamwe kirasi yokutanga makwikwi uye simba, kuti vakarongeka nyika yakachengeteka,, vanoonga pamwe Makontakta vose indasitiri ino.
Corrugated Roofing Sheet kuna Gambia
Kwakakurudzira Coil kuna Georgia
Greenhouse Pipe kuna Korea